Vokatry ny Fanahy: Finoana
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Aja Albaney Alemà Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuuk Cinghalais Danoà Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Igede Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mingrelian Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Palau Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Urhobo Uruund Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zoloa Éwé
MIAVAKA ny hery azo avy amin’ny finoana. Rehefa manam-pinoana, ohatra, isika, dia mahavita ‘mamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra’ alefan’i Satana. (Efes. 6:16) Te hampivadika antsika amin’i Jehovah mantsy izy. Ny finoana koa no manampy antsika hahavita hiatrika ny olana mahazo antsika, na ngezabe hoatran’ny tendrombohitra aza ilay izy. Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Raha manam-pinoana ianareo, na bitika toy ny voan-tsinapy aza, ary hilaza amin’irỳ tendrombohitra irỳ hoe: ‘Mifindrà erỳ’, dia hifindra izy.” (Mat. 17:20) Mahatonga antsika hatanjaka ara-panahy kokoa àry ny finoana, ka tsara raha dinihintsika ireto: Inona no atao hoe finoana? Nahoana no tokony hankasitraka ny fahamarinana isika raha te hanam-pinoana? Inona no azontsika atao mba hanatanjahana ny finoantsika? Ary iza no tokony hinoantsika?—Rom. 4:3.
Tsy hoe mino na manaiky an’izay lazain’ny Baiboly fotsiny ny hoe manam-pinoana. Ny “demonia koa [mantsy] mba mino [hoe misy Andriamanitra] ka mangovitra.” (Jak. 2:19) Inona àry no atao hoe finoana?
Matoky isika hoe ho tanteraka foana izay lazain’Andriamanitra, hoatr’antsika matoky hoe hisy foana ny andro sy ny alina
Milaza ny Baiboly fa misy zavatra roa tafiditra amin’izany. Voalohany, “ny finoana dia fiandrasana amin-toky ny zavatra antenaina.” (Heb. 11:1a) Raha manam-pinoana ianao, dia hatoky tanteraka hoe tena marina izay rehetra tenenin’i Jehovah, ary ho tanteraka foana izay ampanantenainy. Izao, ohatra, no nolazainy tamin’ny Israelita: “Raha vitanareo ny manafoana ny fifanekena nifanaovako tamin’ny andro sy ny fifanekena nifanaovako tamin’ny alina, mba tsy hisy amin’ny fotoanany ny andro sy ny alina, dia ho azo foanana koa ny fifanekena nataoko tamin’i Davida mpanompoko.” (Jer. 33:20, 21) Ianao ve izao dia matahotra hoe tsy hiposaka intsony ny masoandro, ka tsy hisy intsony ny andro sy ny alina? Tsy ho tonga ao an-tsainao akory izany! Tsy hieritreritra mihitsy ianao hoe hiova izany. Raha izany aza tsy mampisalasala anao, dia tokony hanahy ve ianao hoe tsy hanatanteraka an’izay ampanantenainy Ilay namorona ny andro sy ny alina?—Isaia 55:10, 11; Mat. 5:18.
Faharoa, ny finoana dia “fanomezana porofo mazava momba ny zavatra tena misy izay tsy hita maso.” (Heb. 11:1b) Raha misy ankizikely manontany anao hoe: ‘Ahoana kay no ahafantarana hoe tena misy ny rivotra?’, dia ahoana no havalinao? Marina hoe mbola tsy nahita rivotra mihitsy ianao. Fantatrao anefa hoe tena misy izy io satria misy porofo be dia be manamarina an’izany, ary azonao lazaina amin’ilay ankizy ireny. Afaka miaina, ohatra, ianao. Hita maso koa ny zavatra ataon’ny rivotra. Rehefa resy lahatra amin’ireny porofo ireny ilay ankizy, dia hino izy hoe tena misy ny rivotra na dia tsy hitany aza. Miorina amin’ny porofo mazava tsara hoatr’izany koa ny finoana.—Rom. 1:20.
ILAINA NY MANKASITRAKA NY FAHAMARINANA
Mila miezaka hanana “fahalalana marina tsara ny fahamarinana” isika, satria tsy hanam-pinoana isika raha tsy manana porofo mazava. (1 Tim. 2:4) Tsy ampy anefa izany. Hoy mantsy ny apostoly Paoly: “Amin’ny fo no inoana.” (Rom. 10:10) Tsy hoe tokony hino ny fahamarinana fotsiny àry isika, fa mila mihevitra azy io ho sarobidy koa. Amin’izay ihany isika vao hazoto haneho ny finoantsika, izany hoe hanao zavatra mifanaraka amin’ny fahamarinana. (Jak. 2:20) Raha tsy tena tia ny fahamarinana amin’ny fony manontolo ny olona iray, dia tsy hekeny na dia porofo marim-pototra aza. Mety ho efa manana ny heviny mantsy izy dia tsy laitra akisoka amin’izany, na izy te hanao izay tiany fotsiny. (2 Pet. 3:3, 4; Joda 18) Izany no nahatonga ny olona sasany taloha tsy hanam-pinoana na dia nahita fahagagana aza. (Nom. 14:11; Jaona 12:37) Izay olona tena tia ny fahamarinana ihany no ampian’ny fanahy masina mba hanam-pinoana.—Gal. 5:22; 2 Tes. 2:10, 11.
INONA NO NANAMPY AN’I DAVIDA HANANA FINOANA MATANJAKA?
Anisan’ireo olona nanana finoana miavaka i Davida Mpanjaka. (Heb. 11:32, 33) Tsy hoatr’azy daholo anefa ny fianakaviany. Hita hoe tsy ampy finoana, ohatra, i Eliaba zokiny lahimatoa, indray mandeha. Tsy natoky mantsy izy hoe hamonjy an’i Davida i Jehovah, ka nobedesiny i Davida rehefa nilaza hoe handeha hiady amin’i Goliata. (1 Sam. 17:26-28) Tsy misy olona vao teraka dia efa manam-pinoana. Tsy manaranaka koa ilay izy. Matoa àry i Davida nanam-pinoana dia satria izy mihitsy no niezaka nifandray tamin’Andriamanitra.
Nohazavain’i Davida ao amin’ny Salamo faha-27 ny nahatonga azy hanana finoana matanjaka (and. 1). Nisaintsaina ny zavatra niainany sy ny fomba nanampian’i Jehovah azy handresy ny fahavalony i Davida (and. 2, 3). Tena sarobidy taminy ny tranolay masin’i Jehovah (and. 4). Nanompo an’i Jehovah niaraka tamin’ireo mpiara-mivavaka taminy koa izy tany (and. 6). Nivavaka mafy izy mba hahazoana ny tari-dalan’i Jehovah (and. 7, 8). Nangataka an’i Jehovah mba hampianatra azy ny fomba fiheviny koa i Davida (and. 11). Tena zava-dehibe taminy ny finoana ka niteny izy hoe: “Inona no ho niafarako raha tsy nino aho?”—And. 13.
Hanam-pinoana hoatran’ny an’i Davida ianao raha manahaka ny toe-tsainy sy ny fahazarany voaresaka ao amin’ny Salamo faha-27. Efa hitantsika teo hoe mila manana fahalalana marina tsara isika vao hanam-pinoana. Mila mianatra Baiboly sy ireo boky aman-gazetintsika àry isika, amin’izay ho mora kokoa amintsika ny hanana an’io vokatry ny fanahy io. (Sal. 1:2, 3) Makà fotoana hisaintsainana rehefa mianatra. Hanampy anao hankasitraka kokoa an’i Jehovah mantsy izany. Vao mainka te haneho ny finoanao ianao amin’izay, ka hazoto hanompo azy rehefa any am-pivoriana ary hazoto hiresaka momba ny fanantenanao. (Heb. 10:23-25) Mampiseho koa ianao hoe manam-pinoana rehefa ‘mivavaka foana.’ (Lioka 18:1-8) Matokia hoe ‘miahy anao’ i Jehovah, ka “aza mitsahatra mivavaka.” (1 Pet. 5:7; 1 Tes. 5:17) Rehefa manam-pinoana isika dia lasa manao ny tsara, ary arakaraka ny anaovantsika ny tsara no vao mainka hampahatanjaka ny finoantsika.—Jak. 2:22.
MANEHOA FINOANA AN’I JESOSY
Nilaza toy izao tamin’ny mpianany i Jesosy ny alina talohan’ny nahafatesany: “Minoa an’Andriamanitra ary minoa koa ahy.” (Jaona 14:1) Mila mino an’i Jesosy koa àry isika, fa tsy hoe mino an’i Jehovah fotsiny. Ahoana no ampisehoantsika hoe mino an’i Jesosy isika? Ireto misy fomba telo hanaovana an’izany:
Ahoana no ampisehoantsika hoe mino an’i Jesosy isika?
Voalohany, raiso ho fanomezana nataon’Andriamanitra ho anao mihitsy ny vidim-panavotana. Hoy ny apostoly Paoly: ‘Izao fiainako ao amin’ny nofo izao dia iainako mifanaraka amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany ho ahy.’ (Gal. 2:20) Raha maneho finoana an’i Jesosy ianao, dia hino tanteraka hoe ho anao no nanaovany sorona ny ainy. Tena hino koa ianao hoe io sorona io no ahafahanao mahazo famelan-keloka sy manantena hiaina mandrakizay, ary izy io no porofo lehibe indrindra hoe tia anao Andriamanitra. (Rom. 8:32, 38, 39; Efes. 1:7) Hanampy anao hatanja-tsaina izany ka tsy hanamelo-tena ianao na hanambany tena.—2 Tes. 2:16, 17.
Faharoa, mivavaha mba hifandray akaiky amin’i Jehovah. Afaka manao an’izany isika noho ny soron’i Jesosy. Noho izy io koa, dia lasa ‘sahy miteny’ isika rehefa mivavaka, “amin’izay isika dia hahazo famindram-po ary hanehoana hatsaram-panahy tsy manam-paharoa, mba hahazoana fanampiana amin’ny fotoana mety.” (Heb. 4:15, 16; 10:19-22) Rehefa mivavaka koa isika, dia vao mainka ho tapa-kevitra ny hanohitra fakam-panahy.—Lioka 22:40.
Fahatelo, ankatoavy i Jesosy. Hoy ny apostoly Jaona: “Izay maneho finoana ny Zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mankatò ny Zanaka kosa tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy.” (Jaona 3:36) Ilay hoe “tsy mankatò” no ampifanoherin’i Jaona amin’ilay hoe “maneho finoana.” Maneho finoana an’i Jesosy àry ianao rehefa mankatò azy ka manaraka ny “lalàn’i Kristy”, izany hoe miaina mifanaraka amin’izay rehetra nampianariny sy nandidiany. (Gal. 6:2) Mankatò azy koa ianao raha manaraka ny toromarika omeny amin’ny alalan’ny “mpanompo mendri-pitokisana sy malina.” (Mat. 24:45) Raha mankatò an’i Jesosy ianao dia hahazo hery hiaretana an’izay olana mahazo anao, na dia mafy hoatran’ny oram-baratra aza izany.—Mat. 7:24, 25.
“MIORENA TSARA EO AMIN’NY FINOANAREO MASINA INDRINDRA”
Niantsoantso an’i Jesosy ny lehilahy iray indray mandeha, dia niteny taminy hoe: “Manam-pinoana aho! Ampio aho eo amin’izay mbola tsy ampy amin’ny finoako!” (Mar. 9:24) Efa nanam-pinoana izy fa nanetry tena dia niaiky hoe mbola nila finoana bebe kokoa. Misy fotoana isika rehetra mila finoana bebe kokoa hoatr’izany, ary afaka manatanjaka azy io daholo isika dieny izao. Hitantsika tato hoe manao an’izany isika rehefa mianatra sy misaintsaina ny Tenin’Andriamanitra, ka lasa mankasitraka kokoa an’i Jehovah. Hihamatanjaka koa ny finoantsika rehefa manompo an’i Jehovah miaraka amin’ireo rahalahy sy anabavy, miresaka momba ny fanantenantsika, ary tsy mitsahatra mivavaka. Hahazo an’ilay valisoa lehibe indrindra isika raha miezaka manao an’ireo. Inona izany valisoa izany? Milaza ny Baiboly hoe ‘hitoetra ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra isika, raha miorina tsara eo amin’ny finoana.’—Joda 20, 21.